Ahoana no ahafahan'ny mpanonta manamboatra tsanganana teknika hahatratrarana mpihaino marobe miovaova | Martech Zone
Ahoana no ahafahan'ny mpanonta manamboatra tsanganana teknika hahatratrarana mpihaino marobe miovaova be
Alakamisy, Desambra 10, 2020 Alakamisy, Desambra 10, 2020 Elena Podshuveit
2021 no hanamboatra azy na hanorotoro azy ho an'ny mpanonta. Ny taona ho avy dia hampitombo avo roa heny ny tsindry amin'ireo tompona haino aman-jery, ary ireo mpilalao mahay indrindra ihany no hijanona ambony. Ny dokambarotra niomerika araka ny fantatsika fa efa hifarana izao. Handeha amin'ny tsena misy sombin-javatra misimisy kokoa isika, ary mila mieritreritra ny toerana misy azy ireo ny mpanonta amin'ity ecosystem ity.
Ireo mpamoaka boky dia hiatrika olana goavana amin'ny fahombiazany, ny mombamomba ny mpampiasa ary ny fiarovana ny angon-drakitra manokana. Mba hahatafitana velona, ​​mila eo an-tsoratry ny haitao izy ireo. Ankoatr'izay, hofongarako ireo olana lehibe hitranga 2021 ho an'ny mpamoaka sy ny teknolojia mamaritra izay afaka hamaha azy ireo.
Fanamby ho an'ny mpanonta
Ny 2020 dia nivadika ho tafio-drivotra tonga lafatra ho an'ny indostria, satria niaritra tsindry avo roa heny avy amin'ny fihemorana ara-toekarena sy fanesorana tsikelikely ireo doka ny mpanonta. Ny fanosehana mpanao lalàna ho an'ny fiarovana ny angon-drakitra manokana sy ny fampihenan'ny tetibola dokam-barotra dia mamorona tontolo vaovao iray vaovao izay mila ampifanarahan'ny famoahana nomerika amin'ireo fanamby telo lehibe.
Ny fitsapana lehibe voalohany ho an'ny mpitory dia ny fihemoran'ny toekarena nateraky ny COVID-19. Miato ny dokam-barotra, mihemotra ny fampielezan-kevitr'izy ireo, ary manaparitaka teti-bola amin'ny fantsona mahomby kokoa.
Ho avy ny fotoana dire ho an'ny fampahalalam-baovao tohanan'ny doka. Raha ny filazan'ny IAB, ny krizy korona dia nahatonga fitomboana be tamin'ny fanjifàna vaovao, saingy tsy azon'ny mpanonta atao ny manangom-bola (mpanonta vaovao no in-droa toy izao hatao ankivy amin'ny mpividy haino aman-jery vs. ny hafa).
Buzzfeed, haino aman-jery viraly iray izay niaina fitomboan'ny vola miditra indroa tato anatin'ny roa taona lasa izay notapahina fanapahana mpiasa miaraka amina andry hafa amin'ny famoahana vaovao nomerika toa an'i Vox, Vice, Quartz, The Economist, sns. Na dia niaina faharetana aza ireo mpitory manerantany nandritra ny krizy, dia maro ny media sy eo an-toerana no tsy nanana asa.
Iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra ho an'ny mpitory amin'ny taona ho avy ny fametrahana ny mombamomba ny mpampiasa. Noho ny fanafoanana ny cookies an'ny antoko fahatelo an'ny Google, dia hanjavona ny adiresy amin'ny fantsona tranonkala. Hisy fiatraikany amin'ny fanendrena ny mpihaino, ny tsenambarotra, ny fatran'ny hatetika ary ny fanondroana maro-mikasika.
Very ny karana iraisan'ny besinimaro amin'ny fanodinana dokambarotra dizitaly, izay tsy maintsy ihodivirana any amin'ny faritra misaraka kokoa. Ny indostria dia efa nanolotra safidy hafa amin'ny fanarahana famaritana, mifototra amin'ny fanombanana ny fahombiazan'ny ekipa, toy ny Google Privacy Sandbox, ary ny Network SKAd an'ny Apple. Na izany aza, na ny vahaolana mandroso indrindra aza dia tsy hitarika amin'ny fiverenana amin'ny raharaham-barotra toy ny mahazatra. Amin'ny ankapobeny, miroso amin'ny tranonkala tsy fantatra anarana izahay.
Izy io dia tontolo vaovao, izay hisian'ny mpanao dokam-barotra hisoroka ny fandaniam-bola be loatra amin'ny resaka tsy fahaiza-mitantana, hahatratra ny mpanjifa amin'ny hafatra diso, ary hikendry malalaka loatra sns. Elaela vao hamolavola fomba vaovao ahazoana mpampiasa ary mila fitaovana vaovao sy modely fanamarihana hanombanana ny fahombiazana ary tsy miankina amin'ny ID dokambarotra ho an'ny mpampiasa.
Fisondrotana amin'ny lalàna mifehy ny fiainana manokana, toa an'i Eropa Fitsipika ankapobeny (GDP) ary ny Ny lalàna momba ny tsiambaratelo momba ny mpanjifa any California an'ny taona 2018, mahatonga azy io ho sarotra kokoa ny mikendry sy manamboatra doka ho an'ny fihetsiky ny mpampiasa amin'ny Internet.
Ireo lalàna mifantoka amin'ny angon-draketan'ireo mpampiasa ireo dia hamaritra ny fiovana ho avy eo amin'ny paikadin'ny teknolojia sy ny angon-drakitra marika. Ity rafitra mifehy ity dia manelingelina ireo maodely efa misy amin'ny fanarahan-dia ny fihetsiky ny mpampiasa fa manokatra varavarana ho an'ireo mpanonta hanangona ny angon-drak'ireo mpampiasa miaraka amin'ny fanekeny.
Mety hihena ny habetsaky ny angona, fa ny politika kosa hampitombo ny kalitaon'ny angona azo alaina ao anatin'ny fotoana maharitra. Ireo mpanonta dia mila mampiasa ny fotoana sisa tavela hananganana modely hifaneraserana amin'ny mpihaino. Ny lalàna mifehy ny tsiambaratelo dia tokony hifanaraka amin'ny teknikan'ny mpampanonta sy ny fomba fitantanana data. Tsy misy vahaolana tokana-tokana satria misy fitsipika hafa momba ny tsiambaratelo amin'ny tsena samihafa.
Ahoana no ahombiazan'ny mpitory amin'ny fizahantany vaovao?
Ao amin'ny tsena mizarazara vaovao, ny angon-drakitry ny mpampiasa no fananana sarobidy indrindra amin'ny mpanao dokam-barotra. Manome ny fahatakarana ny mpanjifa ny mpanjifa, ny zavatra mahaliana azy, ny fividianana ny safidiny ary ny fitondran-tena isaky ny touchpoint miaraka amin'ny marika. Na izany aza, ny lalàna momba ny tsiambaratelo tato ho ato sy ny fizotran'ireo ID momba ny dokam-barotra dia manasarotra ity fananana ity.
Iray amin'ireo fotoana lehibe indrindra ahazoan'ny mpitory ny manavaka ny angon-drakitry ny antoko voalohany, mampihetsika azy amin'ny rafitra ivelany, na manome azy ireo ho an'ny mpanao dokam-barotra ho an'ny tanjona voafaritra tsara amin'ny fitehirizany manokana.
Ireo mpampanonta savvy dia mampiasa algorithma fianarana milina mba hahatakarana tsara kokoa ny fanjifana votoaty sy hanangonana ireo mombamomba ny fitondran-tena amin'ny antoko voalohany, izay tena hotanterahina amin'ny marika manokana. Ohatra, ny tranokalan'ny famerenana fiara dia mety manangona ampahany amin'ireo matihanina antonony 30-40 karama; ny tsena voalohany amin'ny fanombohana sedan. Ny magazay lamaody dia afaka manangona ny mpihaino vehivavy be karama ho an'ny marika akanjo lafo vidy kendrena.
Ireo tranonkala maoderina, sehatra ary fampiharana mazàna dia misy mpihaino iraisam-pirenena, izay zara raha afaka mahazo vola amin'ny alàlan'ny fifanarahana mivantana. Ny programmatic dia afaka manome ny fangatahana manerantany amin'ny alàlan'ny oRTB sy fomba fividianana programa hafa miaraka amin'ny vidiny miorina amin'ny tsena ho an'ny fahatsapana.
Vao tsy ela akory izay ny Buzzfeed, izay nanery ny fampidirana azy io teo aloha, niverina tany amin'ny programmatic fantsona fivarotana ny toerana anaovany doka. Mila vahaolana ny mpanonta hamela azy ireo hitantana tsara ny mpiara-miasa amin'ny fangatahana, hamakafaka ny toerana anaovana doka tsara indrindra sy hanatanterahana ny tombam-bidiny.
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana sy fampifangaroana ireo mpiara-miombon'antoka samihafa, ny mpanonta dia afaka mahazo ny vidiny tsara indrindra ho an'ny fametrahana premium ary koa ny fivezivezena sisa. Ny tolotra lohan-doha dia ny teknolojia tonga lafatra amin'izany, ary miaraka amina fananganana faran'izay kely dia afaka hanaiky tolotra marobe avy amin'ny sehatra fangatahana isan-karazany ny mpanonta. Fampandrenesana lohateny no teknolojia tonga lafatra amin'izany, ary miaraka amina fananganana faran'izay kely dia afaka hanaiky tolotra marobe avy amin'ny sehatra fangatahana isan-karazany ny mpanonta.
Ny haino aman-jery tohanan'ny doka dia mila manandrana endrika endrika doka malaza hanonerana ny fatiantoka fidiram-bolan'ny fampielezan-kevitra niato.
Ao amin'ny 2021, ny laharam-pahamehana amin'ny dokam-barotra dia hihalehibe hatrany amin'ny doka horonantsary.
Ny mpanjifa maoderina dia mandany hatramin'ny 7 ora mijery horonan-tsary nomerika isan-kerinandro. Ny horonan-tsary no karazana atiny manintona indrindra. Takatry ny mpijery 95% ny hafatra iray rehefa mijery azy amin'ny horonantsary ampitahaina amin'ny 10% rehefa mamaky azy.
Araka ny tatitry ny IAB, efa ho ny roa ampahatelon'ny tetibola niomerika no natokana ho an'ny doka video, na amin'ny finday na amin'ny birao. Ny horonan-tsary dia miteraka fahatsapana maharitra izay miteraka fiovam-po sy varotra. Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny lalao fandaharana dia mila fahaiza-manao ny dokam-barotra amin'ny fampirantiana doka video izay mifanaraka amin'ny sehatra fangatahana lehibe.
Tech Stack Ho an'ny fitomboan'ny fitomboana
Amin'izao fotoan-tsarotra izao, ny mpitory dia tokony hampiasa izay tombony azo avy amin'ny fividianana vola rehetra. Vahaolana teknolojia marobe no hamela ny mpanonta hamaha ny mety ho tsy fampiasàna azy sy hampiakatra CPM.
Teknolojia amin'ny fampiakarana angon-drakitra antoko voalohany, fampiasana fomba maoderina fandaharana, ary fametrahana endrika doka fangatahana fangatahana dia ampahany amin'ny tsy maintsy ananana ho an'ny firaketana teknolojia 2021 an'ny mpanonta nomerika.
Matetika, ny mpanonta dia manangona ny valiny haitao avy amin'ny vokatra isan-karazany izay tsy mifangaro tsara eo amin'izy samy izy. Ny fironana farany amin'ny famoahana nomerika dia ny fampiasana sehatra tokana izay mameno ny filàna rehetra, izay mihazakazaka tsara ny fampandehanana rehetra ao anatin'ny rafitra fanamiana. Andao hodinihintsika izay modules tokony hananana ny stack tech integrated ho an'ny media.
Voalohany indrindra dia mila manana mpizara doka ny tahirin'ny teknolojia an'ny mpanonta. Ny mpizara doka mety dia ilaina amin'ny fanodikodinam-bola mahomby. Mila manana ny fampiasa amin'ny fitantanana ny doka sy ny lisitra. Ny mpizara doka dia mamela hametraka vondrona doka sy vondrona retargeting ary manome statistika tena izy momba ny zava-bitan'ny slot doka. Mba hahazoana antoka ny tahan'ny famenoana mety dia mila manohana ireo endrika doka rehetra misy ireo mpizara doka, toy ny fampisehoana, horonan-tsary, doka finday ary haino aman-jery manankarena.
Sehatra fitantanana data (DMP)
Avy amin'ny fomba fijery mahomby - ny zava-dehibe indrindra amin'ny haino aman-jery amin'ny 2021 dia ny fitantanana angon-drakitra an'ny mpampiasa. Ny fanangonana, ny fanadihadiana, ny fizarazarana ary ny fampahavitrihana ireo mpihaino dia tsy maintsy atao ankehitriny.
Rehefa mampiasa DMP ny mpanonta dia afaka manome sosona angona fanampiny ho an'ny mpanao dokam-barotra izy ireo, manatsara ny kalitao sy ny CPM an'ireo fientanam-po. Ny data dia ny volamena vaovao, ary ny mpanonta dia afaka manolotra azy io hikendry ny fitatanany manokana, hanombatombana ny fiheverana avo kokoa, na hampihetsika azy ireo amin'ny rafitra ivelany ary hanangona vola amin'ny fifanakalozana data.
Ny fanafoanana ireo doka fanaovana dokam-barotra dia hampiakatra ny filan'ny antontam-baovao 1, ary ny DMP no fepetra ilaina hanangonana sy hitantanana ny angon-drakitra ho an'ny mpampiasa, hananganana dobo data, na hampitana vaovao amin'ny mpanao dokam-barotra amin'ny alàlan'ny sarin'ny mpampiasa.
Vahaolana amin'ny lohateny lohateny
Headering bidding dia teknolojia manafoana ny asymmetran'ny fampahalalana eo amin'ny mpanao dokam-barotra sy ny mpanonta mikasika ny sandan'ny fifamoivoizana. Ny tolotra lohan-doha dia mamela ny ankolafy rehetra hahazo vidiny mifototra amin'ny fangatahana ho an'ny habaka doka. Izy ity dia lavanty iray izay ahitan'ny DSP fahazoan-dàlana mitovy amin'ny tolotra, mifanohitra amin'ny riandrano sy oRTB, izay hidiran'izy ireo ny lavanty.
Ny fampiharana ny tolotra lohan-doha dia mitaky loharanom-pivoarana, dokam-barotra efa za-draharaha izay hametraka singa andalana ao amin'ny Google Ad Manager ary hanao sonia fifanarahana amin'ireo mpifaninana. Miomàna: ny fametrahana ny hetsika fanaovana lohateny lohateny dia mitaky ekipa, fotoana ary ezaka be fandavan-tena, izay matetika be aza na dia ho an'ireo mpanonta be aza.
Mpilalao horonantsary sy audio
Mba hanombohana ny fanaovana doka amin'ny horonan-tsary, ny endrika doka misy eCPM avo indrindra, ny mpanonta dia mila manao enti-mody. Sarotra kokoa ny dokambarotra an-tsary noho ny fampisehoana ary mila manisa lafiny teknika maromaro ianao. Voalohany indrindra, mila mahita mpilalao video mifanaraka amin'ny fonosana lohan-tsafidinao ianao. Miroborobo koa ny endrika doka am-peo, ary ny fametrahana mpilalao audio ao amin'ny pejin-tranonkalanao dia mety hitaky fangatahana fanampiny avy amin'ny mpanao dokam-barotra.
Sehatra fitantanana famoronana (CMP)
CMP dia fepetra takiana amin'ny fitantanana ny famoronana programa ho an'ny sehatra sy endrika doka samihafa. Ny CMP dia mandamina ny fitantanana famoronana rehetra. Tokony hanana studio famoronana izy io, fitaovana hanovana, hanitsiana ary hamoronana sora-baventy manankarena avy amin'ny rangotra misy modely. Ny iray amin'ireo zavatra tsy maintsy ananan'ny CMP dia ny fiasa hanamboarana famoronana tsy manam-paharoa ho an'ny doka amin'ny sehatra samihafa sy ny fanohanan'ny fanatsarana ny famoronana (dinika) Ary, mazava ho azy, ny CMP tsara dia tsy maintsy manome tranomboky misy endrika doka mifanaraka amin'ny DSP lehibe sy ny fanadihadiana momba ny fahombiazan'ny famoronana amin'ny fotoana tena izy.
Amin'ny ankapobeny, ny mpanonta dia mila manakarama CMP izay manampy amin'ny fanamboarana haingana sy fametrahana endrika famoronana fangatahana fangatahana tsy misy fanitsiana tsy misy farany, ary koa manamboatra sy mifantoka amin'ny ambaratonga.
Betsaka ny vato manorina ho an'ny fahombiazan'ny media nomerika. Izy ireo dia misy ny fahaiza-manao amin'ny famoahana doka mahomby amin'ny endrika doka malaza, ary koa ny vahaolana amin'ny programa mba hiarahana amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fangatahana lehibe. Ireo singa ireo dia tokony hiara-hiasa tsy misy fangarony, ary ny tokony ho izy dia tokony ho ampahany amin'ilay stack tech.
Rehefa misafidy tambajotram-teknolojia mitambatra ianao fa tsy manangona azy amin'ny maodelin'ireo mpamatsy samihafa, azonao antoka fa hatolotra tsy misy latsa-bato, traikefa mahantra amin'ny mpampiasa, ary tsy fitoviana amin'ny lozisialy doka.
Ny fantsom-teknolojia mety dia mila manana fampiasa handefa doka horonan-tsary sy feo, fitantanana angona, tolotra lohan-doha ary sehatra fitantanana famoronana. Ireo no tokony hananana rehefa mifidy mpamatsy, ary tsy tokony hipetraka amin'ny zavatra kely kokoa ianao.
Tags: dokam-barotrabuzzfeedCmpCPMsehatra fitantanana famoronanaangona fitantananasehatra fitantanana dataHafanàm-po an haino aman-jerydmpvahaolana amin'ny lohateny lohatenymaha-marketing tech stackstack martechny fiainana manokanafandaharan'asamarketing amin'ny programampitorydoka videodokam-barotra amin'ny horonan-tsaryvideo marketingmpilalao video
Elena Podshuveit no Lehiben'ny vokatra ao amin'ny Admixer. Manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny fitantanana tetikasa dizitaly izy. Hatramin'ny 2016 dia tompon'andraikitra tamin'ny tsipika vokatra Admixer SaaS izy. Ny portfolio-n'i Elena dia misy fanombohana mahomby, tetik'asa ho an'ireo mpanao dokambarotra ambony (Philips, Nestle, Ferrero Rocher, Kimberly-Clark, Danone, Sanofi), vahaolana SaaS, fandefasana vavahady an-tserasera ary fampiharana finday. Elena dia nanontany tamin'ny trano famoahana lehibe momba ny digitalisation sy ny monetization ny fananany.
Inona ny tahan'ny famoahana? Ahoana no hanatsaranao ny tahan'ny fiakarana?
Ahoana no nanamboarako dolara an-tapitrisany amin'ny orinasa B2B miaraka amin'ny horonantsary LinkedIn